कुन दलले कहाँ उठाउने भयो साझा उम्मेदवार ? | Nepal Ghatana
कुन दलले कहाँ उठाउने भयो साझा उम्मेदवार ?
प्रकाशित : ७ बैशाख २०७९, बुधबार १३:३०
२०७४ मा ललितपुर र विराटगरबाट काँग्रेसले मेयर र उपमेयर, वीरगञ्जमा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी, भरतपुरमा माओवादीले मेयर जितेको थियो । काठमाडौंबाट एमालेले मेयर र पोखरामा मेयर र उपमेयर दुवै जितेको थियो । काँग्रेसले वीरगञ्ज, भरतपुर र काठमाडौंमा उमपेयर जितेको थियो ।